Ama M Ugbu A na M Ga-enyeliri Ndị Ọzọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabardin-Cherkess Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Mari Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Norwegian Nyaneka Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Romany (Vlax, Russia) Ronga Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Akụkọ Julio Corio kọrọ
ABỤ M ONYE: GỤATEMALA
NDỤ M BIRI: ỌTỤTỤ NSOGBU BỊAARA M MGBE M BỤ NWATA
A mụrụ m n’obodo Akụl dị́ na Gụatemala. Obodo a dịpụrụ adịpụ, dịrịkwa n’ugwu. Ezinụlọ anyị bụ ndị agbụrụ Izụl bụ́ ndị Maya. M na-asụ asụsụ anyị bụ́ Izụl, na-asụkwa Spanish. N’oge a mụrụ m, a na-alụ agha na Gụatemala. A lụọla agha a afọ iri abụọ tupu a mụọ m. Mgbe a mụchara m, a lụgidekwara ya ruo afọ iri na isii. Ọtụtụ ndị Izụl nwụrụ n’oge a na-alụ agha a.
Mgbe m dị afọ anọ, nwanne m nwoke dị́ afọ asaa ji obere bọmbụ a na-eji aka atụ na-egwu egwu, ya agbawaa. Bọmbụ ahụ tkpọrọ m anya ma gbuo nwanne m ahụ. A kpọgara m n’ụlọ akwụkwọ a na-elekọta ụmụaka kpuru ìsì n’isi obodo Gụatemala. Ebe ahụ ka m nọ mụta otú e si agụ ihe e dere ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì. Ndị na-arụ n’ụlọ akwụkwọ ahụ anaghị ekwe ka mụ na ụmụaka ndị ọzọ kpuru ìsì na-ekwurịta okwu. Ụmụ akwụkwọ ibe m anaghịkwa akpa m nso. Aghọtachaghị m ihe mere ha ji na-eme m otú a. Owu na-amakarị m. Ọ na-agụsi m agụụ ike ka oge anyị ji aga ezumike ọnwa abụọ n’afọ ruwe eruwe ka m gaa hụ mama m n’ihi na ọ na-eji nwayọọ emeso m ihe, na-egosikwa m obiọma. Ma, ọ nwụrụ mgbe m dị afọ iri. Ọnwụ ya gbawara m obi n’ihi na ọ bụ naanị ya ka m ma hụrụ m n’anya.
Mgbe m dị afọ iri na otu, m laghachiri n’obodo anyị, soro nwanne m nwoke na ezinụlọ ya biri. Ha na-akpa afọ m, ma, o nweghị onye n’ime ha chọrọ ịma otú obi na-adị m. Mgbe ụfọdụ, m na-ajụ Chineke, sị: “Gịnị mere mama m ji nwụọ? Gịnị mere i ji kwe ka m kpuo ìsì?” Ndị mmadụ gwara m na ihe ndị a mere m bụ otú Chineke si chọọ ya. M weere ya na obi fere Chineke azụ nakwa na ọ naghị eche banyere m. Naanị ihe mere egbughị m onwe m bụ na o nweghị ihe m hụrụ m ga-eji gbuo onwe m.
Ndị mmadụ na-eme m ihe masịrị ha n’ihi na m kpuru ìsì. Mgbe m dị obere, e dinara m n’ike ugboro ugboro. O nweghị onye m kọọrọ ihe ndị a ndị mmadụ mere m n’ihi na echeghị m na o nwere onye chọrọ ịma banyere m. Ọ na-esi ike ndị mmadụ ekwunyere m okwu, o nweghịkwa onye m na-ekwunyere okwu. M na-anọrọ onwe m, obi ana-ajọ m njọ, o nweghịkwa onye m tụkwasịrị obi.
Mgbe m dị afọ iri na atọ, otu di na nwunye bụ́ Ndịàmà Jehova bịakwutere m mgbe anyị pụrụ brek n’ụlọ akwụkwọ anyị. Otu onye nkụzi anyị ọnọdụ m na-ewute gwara ha ka ha bịa hụ m. Ha si na Baịbụl gwa m na a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ nakwa na otu ụbọchị ndị kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ ọzọ. (Aịzaya 35:5; Jọn 5:28, 29) Ihe a ha kụziiri m tọrọ m ụtọ, ma ebe ọ na-esi ike mụ na mmadụ akpaa nkata, o siiri m ike iso ha kwurịta okwu. Ma, n’agbanyeghị na-anaghị m azaghachicha ha okwu, ha nweere m ndidi na-abịa akụziri m Baịbụl. Di na nwunye a na-eji ụkwụ gaa ihe karịrị kilomita iri, rịakwa ugwu tupu ha erute n’obodo anyị.
Nwanne m nwoke gwara m na di na nwunye ahụ enweghị ego, mana ha na-adị mma n’anya. N’agbanyeghị na ha enweghị ego, ha na-echebara m echiche, na-enyekwa m obere onyinye. Echere m na ọ bụ naanị ezigbo Ndị Kraịst ga-ewepụtali onwe ha otú a na-enyere mmadụ aka.
E ji akwụkwọ ndị e ji mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì dee kụziere m Baịbụl. Ọ bụ eziokwu na m na-aghọta ihe a na-akụziri m, ma ọ na-esiri m ike ikweta ihe ụfọdụ. Dị ka ihe atụ, o siiri m ike tupu mụ ekweta na Chineke na ndị mmadụ na-eche banyere m. Aghọtara m ihe mere Chineke ji hapụtụgodị ka ihe ọjọọ na-eme, ma, o siiri m ike iwere ya ka ezigbo Nna hụrụ m n’anya. *
Nwayọọ nwayọọ ihe ndị m na-amụta na Baịbụl mere ka m gbanwee echiche m. Dị ka ihe atụ, amụtara m na ihe gbasara ndị na-ata ahụhụ na-emetụ Chineke n’obi. N’otu oge a na-emegbu ndị Chineke, o kwuru, sị: “N’ezie, ahụwo m ahụ́ a na-emekpa ndị m . . . m maara nnọọ ihe mgbu ha na-enwe.” (Ọpụpụ 3:7) Mgbe m ghọtara na Jehova na-eche banyere m, m nyefere ya onwe m. N’afọ 1998, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
Mụ na nwanna ahụ m bi na nke ha
Mgbe ihe dị ka otu afọ gara m mechara baptizim, agara m ebe a nọ kụziere mụ na ndị ìsì ibe m ihe ụfọdụ. Ebe ahụ dị nso n’obodo Eskuintila. Otu okenye nọ́ n’ọgbakọ dị́ ebe ahụ chọpụtara na ọ na-anaghị adịchara m mfe isi n’ụlọ anyị na-aga ọmụmụ ihe. Ọgbakọ kacha dịrị mụ nso dị n’ebe di na nwunye ahụ na-abịa akụziri m Baịbụl na-esi abịa. Ọ pụtara na mgbe ọ bụla m ga-aga ọmụmụ ihe, m na-arị ugwu ahụ ha na-arị abịa na nke m, ọ naghịkwa adịrị m mfe. Okenye a rịọrọ otu ezinụlọ Ndịàmà Jehova bí n’Eskuintla ka mụ na ha biri nakwa ka ha nyere m aka ịna-aga ọmụmụ ihe, ha ekweta, mụ akwafetazie na nke ha. Mụ na ha bikwa ruo taa. Ha na-elekọtakwa m ka m̀ bụ nwa ha ma ọ bụ nwanne ha.
Ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ egosikwala m na ha hụrụ m n’anya n’eziokwu. Ihe ndị a niile emeela ka m kwetasie ike na Ndịàmà Jehova bụ ezigbo Ndị Kraịst.—Jọn 13:34, 35.
Anaghị m ewerezi onwe m ka onye na-abaghị uru ma ọ bụkwanụ onye na-enweghị olileanya. Ndụ m enweela isi. M na-ekwusa ozi ọma oge niile ugbu a. M na-eso Ndịàmà Jehova ibe m akụziri ndị mmadụ Baịbụl kama ịna-echegbu onwe m maka na m kpuru ìsì. Abụkwa m okenye n’ọgbakọ. M na-eji Baịbụl agwa ọhaneze okwu n’ọgbakọ. E nweekwala mgbe m ji Baịbụl gwa ìgwè mmadụ okwu ná mgbakọ ukwu Ndịàmà Jehova.
Ebe m ji Baịbụl ndị ìsì na-agwa ọgbakọ okwu
N’afọ 2010, m gara Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ozi (nke a na-akpọzi Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze) e nwere na El Salvadọ. Ihe ndị m mụtara n’ụlọ akwụkwọ a mere ka m nwee ike ịna-arụkwu ọrụ ndị m na-arụ n’ọgbakọ nke ọma. Ọzụzụ a e nyere m gosiri m na Jehova Chineke ji m kpọrọ ihe nakwa na ọ hụrụ m n’anya. Obi dị m ụtọ na ọ gụrụ m n’onye ruru eru ịrụrụ ya ọrụ.
Jizọs kwuru, sị: “A na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.” (Ọrụ Ndịozi 20:35) M nwere ike ikwu taa na obi dị m ụtọ n’eziokwu. O nweghị mgbe m cheburu na m ga-enyeliri ndị ọzọ aka. Ma, ama m ugbu a na m ga-enyeliri ndị ọzọ aka.
^ para. 13 Ị chọọ ịmatakwu ihe mere Chineke ji hapụ ka ihe ọjọọ dịrị, gụọ isi nke 11 n’akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Ihe Na-eme Ka Mmadụ Nwee Obi Ụtọ
Ihe Baịbụl kwuru ò nwere ike ime ka i nwee obi ụtọ ná ndụ? Isiokwu a kwuru ihe anọ ga-enyere gị aka.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ama M Ugbu A na M Ga-enyeliri Ndị Ọzọ Aka